Dhacdooyinka soo socda - Kulliyadaha Hore ee Colorado
6 / 18 / 2021	June 2021
5 dhacdo, 1
11: am 30	 - 12: 00 pm
CECI Safarada Ardayda ee Mustaqbalka
Juun 1 @ 11:30 subaxnimo - 12: 00 pm
Saxeex hoose, si aad uhesho kulan wada-hadal ah oo ku saabsan fursadaha waxbarasho ee gaarka ah ee Ku -leejka Kulliyadaha Hore ee Colorado Inverness. Dugsigaaga sare wuxuu kasban karaa shahaado jaamacadeed 2 sano ah ama shahaado warshadeed isla waqtigaas shahaadada dugsiga sare. Fursado iskuul oo kala duwan ayaa sidoo kale la heli karaa.
Shirka Macluumaadka Qofka ee CECCS - Juun 1deeda
Juun 1 @ 12:30 pm - 2: 00 pm
Kaqeybgal Kulankaan macluumaad si aad ubarato sida CECCS ay u noqon karto tillaabada xigta mustaqbalka ardaygaaga.
Shirka Macluumaadka Virtual CECCS - Juun 1deeda
+ 2 Inbadan
3 dhacdo, 2
10: am 00	 - 10: am 30
CECP Safarada Ardayda ee Mustaqbalka
Juun 2 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Hoos iska qor, si aad u hesho wada hadal is-dhexgal ah oo ku saabsan fursadaha waxbarasho ee gaarka ah ee Colorado Early Colleges Castle Rock. Dugsigaaga sare wuxuu kasban karaa shahaado jaamacadeed 2 sano ah ama shahaado warshadeed isla waqtigaas shahaadada dugsiga sare. Fursado iskuul oo kala duwan ayaa sidoo kale la heli karaa.
Shirka Macluumaadka Virtual CECA - Juunyo 2deeda
Juun 2 @ 3:00 pm - 4: 00 pm
Saxeex hoose, si aad uhesho kulan wada-hadal ah oo kusaabsan fursadaha waxbarasho ee gaarka ah ee Kulliyadaha Hore ee Colorado Aurora. Dugsigaaga sare wuxuu kasban karaa shahaado jaamacadeed 2 sano ah ama shahaado warshadeed isla waqtigaas shahaadada dugsiga sare. Fursado iskuul oo kala duwan ayaa sidoo kale la heli karaa.
Shirka Macluumaadka Barashada CEC ee Internetka - Juunyo 2deeda
3 dhacdo, 3
CECCR Safarada Ardayda ee Mustaqbalka
Juun 3 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Juun 3 @ 2:00 pm - 2: 30 pm
Shirka Macluumaadka Shaqsiyeed ee CECFC West MS - Juun 3deeda
Juun 3 @ 6:30 pm - 7: 00 pm
Ma xiisaynaysaa inaad barato sida CECFC West MS ay ugu habboon tahay ardaygaaga? Nagala soo qaybgal kulankeena soo socda ee xog-uruurinta macluumaadka ah oo wax badan ka baro CECFC MS West. Wixii su'aalo ah fariin lacey.scadden@coloradoearlycolleges.org.
10: am 00	 - 11: am 00
Shirka Macluumaadka Qofka ee CECW - Juun 5th
Juun 5 @ 10:00 subaxnimo - 11: am 00
Ma xiisaynaysaa inaad barato sida CECW ay ugu habboon tahay ardaygaaga? Nagala soo qaybgal kulankeena soo socda ee macluumaad si aad wax badan uga ogaato CECW.
0 dhacdo, 6
0 dhacdo, 7
3 dhacdo, 8
Juun 8 @ 11:30 subaxnimo - 12: 00 pm
Shirka Macluumaadka Iskuulka ee CECI Virtual - 6/8
Juun 8 @ 1:00 pm - 2: 00 pm
Juun 8 @ 2:00 pm - 3: 30 pm
2 dhacdo, 9
Juun 9 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Shirka Macluumaadka Barashada CEC Online - Juun 9th
Juun 9 @ 1:00 pm - 2: 00 pm
5 dhacdo, 10
Juun 10 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Juun 10 @ 2:00 pm - 2: 30 pm
Shirka Macluumaadka Qofka ee CECCS - Juun 10th
Juun 10 @ 4:00 pm - 5: 30 pm
0 dhacdo, 12
0 dhacdo, 13
0 dhacdo, 14
1 dhacdo, 15
Juun 15 @ 11:30 subaxnimo - 12: 00 pm
7 dhacdo, 16
Juun 16 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Shirka Macluumaadka Shaqsiyeed ee CECFC West MS - Juun 16th
Juun 16 @ 12:00 pm - 1: 00 pm
Ma xiisaynaysaa inaad barato sida CECFC West MS ay ugu habboon tahay ardaygaaga? Nagala soo qaybgal kulankayaga soo socda ee xog-ururinta ah oo wax badan ka baro CECFC West MS. Wixii su'aalo ah fariin lacey.scadden@coloradoearlycolleges.org.
Shirka Macluumaadka Barashada CEC Online - Juun 16th
Juun 16 @ 3:00 pm - 4: 00 pm
+ 4 Inbadan
3 dhacdo, 17
5: am 30	 - 7: 00 pm
Casho Waalid CECFC West MS
Juun 17 @ 5:30 subaxnimo - 7: 00 pm
CECFC West MS waxay martigelin doontaa casho waalid si ay bulshada ula dhisaan waalidiinta kale ee dugsiga dhexe. Daryeelka caruurta ayaa la bixin doonaa!
Juun 17 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Juun 17 @ 2:00 pm - 2: 30 pm
4 dhacdo, 22
8: am 00	 - 4: 00 pm
Soo Dhaweynta Wolf ee Ardayda Cusub ee Diiwaangashan - Juun 22nd
Juun 22 @ 8:00 subaxnimo - 4: 00 pm
Isku qor si aad uga qeybgasho soo dhaweynta ardayda cusub ee Wolf! Goobaha waqtiga la heli karo waa 8-9 subaxnimo, 12-1 galabnimo, iyo 3-4 galabnimo. Saxeex halkan: https://bit.ly/3tOJMvF
Juun 22 @ 11:30 subaxnimo - 12: 00 pm
Shirka Macluumaadka Virtual CECCS - Juun 22nd
Juun 22 @ 12:30 pm - 2: 00 pm
RSVP Hada	Free
+ 1 Inbadan
4 dhacdo, 23
Juun 23 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Shirka Macluumaadka Shaqsiyeed ee CECFC West MS - Juun 23deeda
Juun 23 @ 12:00 pm - 1: 00 pm
Shirka Macluumaadka Barashada CEC Online - Juun 23rd
Juun 23 @ 1:00 pm - 2: 00 pm
2 dhacdo, 24
Juun 24 @ 10:00 subaxnimo - 10: am 30
Juun 24 @ 2:00 pm - 2: 30 pm
0 dhacdo, 26
0 dhacdo, 28